Inkxalabo yaBasebenzi malunga nokuSetyenziselwa kweKhamera yeWest-Worn | Izisombululo ze-OMG
Inkxalabo yabasebenzi malunga nokuSetyenziswa kweKhamera yomzimba
Ngapha kwe-US, iikhamera ezinxibe umzimba ziye zamkelwa zii-arhente zamapolisa ukwandisa ukuphendula kunye nokubonakala elubala. Ukuphunyezwa nokuqwalaselwa kwelizwe lonke kwenzeke ngaphandle kokuchaswa okuthile okuye kwahlangana nako ukusuka kwamapolisa amaninzi phantsi kwemithetho emininzi, oku kuxhathisa kuye kwabangela nakuphi na ukoyikiswa komiliselo lwekhamera yomzimba. Oku kuxhathisa kuye kwaba yinto ephambili ekuphumezeni nasekubambeleleni kumgaqo-nkqubo ohamba nawo. Ipolisa lityhalele ekusetyenzisweni kweekhamera ezinxibe umzimba kwezinye iindawo, zanika izizathu zokophulwa kwemfihlo yabo. Amanye amanye amagosa abanga ukuba iikhamera ezinxibe umzimba zinefuthe elibi kukhuseleko lwamagosa.
Amagosa ngokubanzi ayenoluvo lokuba injongo yekhamera enxibe umzimba yayikukubeka igosa engxakini. Ngokuchasene nemfuno yomkhosi wamapolisa, amapolisa akholelwa ukuba yintoni abayifunayo; amagosa asebupoliseni amaninzi, iimoto ezintsha zokujikeleza kunye nerediyo ehlaziyiweyo. Ngokuqinisekileyo babengenamdla kubo, yayingezizo iikhamera ezazinxibe umzimba ezaziza kunciphisa ulwaphulo-mthetho. Kwezinye iindawo apho iikhamera zomzimba zichasene kakhulu, isebe lamapolisa linikezela ngesibhengezo semali kwabo banxiba iikhamera ezinxibe umzimba. Eminye imimandla efana ne-NYC ikubonile oku kwaye ikufuphi ukuyamkela nayo.
Ngaphandle kwamapolisa ngokubanzi ixhala lokusetyenziswa kwetekhnoloji enxibe umzimba, kubonakele ukuba izikhalazo zabemi ziye zehla kakhulu. Ukwanciphisile ukusebenzisa amapolisa amandla xa ephethe amatyala. Ngelixa kukho iimeko ezilungileyo, ezimbi nezimbi; Zonke iimpembelelo ezibonakalayo ezibonakaliswa ziikhamera zomzimba. Kukho uqikelelo lokuba ukwahluka kwesiphumo kube yimpembelelo yokwamkelwa kweearhente zamapolisa kwiikhamera zomzimba kunye nokuhambelana kwawo nemigaqo-nkqubo yokusetyenziswa. Kwisithili se-phoenix, abaphandi bafumanise ukuba amagosa asebupoliseni abeka kuphela iikhamera zomzimba we-30% yexesha labo xa beyifuna ukuyenza isebenze. I-Anaheim (CA) abaphandi baxela ukusetyenziswa okuphantsi kweekhamera ezinxibe umzimba, kodwa ukuthobela kakhulu imigaqo-nkqubo ekhokelela ekusetyenzisweni kwayo. Kwaye kwaqinisekiswa ukuba emva konyaka wokuqala wokuphunyezwa, elona zinga liphezulu le-85% ukwenziwa, ngelixa kumhlaba wehla malunga ne-65%. Ngelixa oku kusenzeka kwezinye iindawo, kwakhona kuya kuqatshelwa ukuba isebe lamapolisa laseNew Orleans ligcinile isantya esiphezulu sekhamera yokusebenzisa i-97-99%, kwaye oku akuphelanga kusukela ekwamkelweni kwabo. Kufuneka kuqatshelwe ukuba kukho iliso elibukhali le-federal kwi-New Orleans, oku kwenza umgaqo-nkqubo osetyenziswayo ungqongqo kwaye ungqongqo. Uphononongo lubonise ipesenti yomsitho apho iikhamera ezinxibe umzimba zenziwe zasebenza, zezi:
Isigameko sobundlobongela basekhaya- 47%
Iziganeko ezibandakanya ulwaphulo-mthetho olunobundlobongela-39%
Iziganeko ezibandakanya ulwaphulo-mthetho lwepropathi-26.5%
Ukunxiba ikhamera yomzimba kunciphisa kakhulu izinga lesikhalazo ngesixa esikhulu, kukonyusa ukuhambelana nomthetho wegosa elinxibayo. Njengoko sithethile ngaphambili, kukho ukuthobela komgaqo-nkqubo opheleleyo xa igosa linxibe ikhamera yomzimba.
Kuhlala kukho umahluko kwindlela amagosa anxiba ngayo iikhamera ezinxitywa ngumzimba xa kuthelekiswa nabangavumiyo. Amagosa azinikezela ngokunxiba iikhamera zomzimba kunokwenzeka ukuba athobele imigaqo-nkqubo enxibe uMzimba, atshintshe indlela aziphatha ngayo ukuze yamkeleke kakuhle. Babonwa ngokubonisa indlela yokuziphatha engafaniyo kunye nokuba neempawu ezibonakalayo. Kuphando olwenziwe eArizona apho ngaphandle kwamagosa e-50, i-25 ivolontiya ukunxiba ikhamera yomzimba ngelixa abanye banikwa. Kwakukho ingxelo yokuba amagosa azinikeleyo ayengamaxesha e-4 ngakumbi ukuba anike ingxelo yokuba iikhamera zomzimba ziluncedo kwimisebenzi yazo, ziphindwe kabini ukubonelela isilumkiso, i-30% ngakumbi ukubamba ulwaphulo-mthetho kwaye inethuba le-20% lokusebenzisa ikhamera yabo yomzimba ngokuchasene nabo banikwe igunya lokuyinxiba. Kufana nokuba banyanzeliswa ukuba bayenze ukuze bangayihloneli kwaye abayenzi ngendlela efanelekileyo. Ezi ziphumo zibaluleke kakhulu zenze ukuba zikwazi ukucacisa ukumelana kwamagosa kwikhamera yomzimba, kuyanceda nokuqonda ikona baqiqa ngayo. Kukwakhona nenkcazo ecacileyo yemigaqo-nkqubo kunye neempembelelo zekhamera enxibe umzimba kwindlela yokuziphatha kwamapolisa.
Olunye uphando lubonakalisile ukuba amagosa amaninzi akakholelwa ukuba iikhamera ezinxibe umzimba zinokuba nefuthe elibi kwimisebenzi yazo. Baye bagqibela ukuba kwinkxaso epheleleyo yokwamkelwa komntwana. IGoetschel kunye ne-pera kwi2017 zivavanye umahluko phakathi kwamagosa asePittsburg akwamnkela ukusetyenziswa kweekhamera ezazinxibe umzimba, amagosa akholelwa ukuba iyazinciphisa izikhalazo zabemi kwaye anyusa umfanekiso wamapolisa. Ngokubhekisa kwabo bangakwamkeli ukumiliselwa kwekhamera yomzimba, bakholelwa ukuba ukuphunyezwa ngokuqinisekileyo kuya kuphelisa ukuthembana, phakathi kwabemi belo luntu kunye namapolisa. Oku kufumanisa kukwenza kwacaca ukuba amagosa ayahluka ngokubona kuba xa kuthathelwa ingqalelo, amandla kunye nobuthathaka bekhamera enxibe umzimba ngokuqinisekileyo baya kubiza inkxaso kunye nenkcaso yokwenziwa kwabo.
Ezinye iziphumo zaye zajonga kuluntu olwaluchaza ukuba amagosa kumbutho apho ubulungisa buyeyamkelayo ngokubhekisele kwikhamera enxibe umzimba iyakuba semthethweni. Kukholelwa ukuba banokuthenjwa ngakumbi kwi-arhente yabo yokusebenzisa iirekhodi ezisuka kwiikhamera zomzimba, ukuvavanya amagosa abo, kunye nokulungisa iingxaki zabemi ngendlela elungileyo.
Kule mihla, iikhamera ezinxibe umzimba ziye zaba yimpendulo kuxinzelelo lwangaphandle ukwandisa ukuphendula kunye noxanduva lwamandla. Izinto ezininzi zinokuchaphazela imbonakalo yekhamera enxibe umzimba kutshanje. Ngaphandle kokugatywa nokwamkelwa, ibonwe njengetekhnoloji yophando eqhubeka ikhula kwaye ilapha ukuhlala. Kungcono nje ukuba amagosa akubone njengoncedo emsebenzini wawo kwaye kungathintelwa nto kuwo, kufuneka athathelwe ingqalelo ngokupheleleyo ukuba bangakanani na abahlali abathembayo kwaye nokuba bangabenza kangakanani ukubathanda.
1167 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-6 Namhlanje